एसपी सा’प ! लक्ष्मी परियारलाई मलमूत्र खुवाएर चुट्ने काँइली लामाकै कसरी भयो मानहानी ? – YesKathmandu.com
काठमाडौंबाट डेढ घण्टाको गाडी यात्रामा दोलालघाट र त्यहाँबाट करिव ३ घण्टाको गाडी यात्रा गरी पुग्न सकिन्छ काभ्रेको सानोवाङथली । जहाँ गत मंसिर बीस गते लक्ष्मी परियारलाई त्यहाँस्थित सूर्याेदय माध्यमिक विद्यालयका सामाजिक विषयका शिक्षक हिरा लामा र उनकी आमा काँइली (तमाङ)लामाले स्कूलमा रहेको पोलमा बाधेर मलमूत्र खुवाइ निर्घात पिटिएको थियो । र त्यसको चार दिन पछाडि एकाबिहानै मृत अवस्थामा फेला परेकी थिईन लक्ष्मी परियार ।
करिव ४१९ घरपरिवार रहेको छ सानो वाङथलीमा । जसमध्य ४ घर परिवार मात्र दलितको भेटिन्छ । यो हत्या प्रकरण पछाडि दलितहरु अझै हेपिएका/चेपिएको गुनासो पोख्छन श्याम नेपाली,उनकै जेठी भाउजु हुन लक्ष्मी । यो प्रकरण पछाडि समाज जातीय रुपमा विभक्त भएको प्रष्ट चित्र देख्न सकिन्छ त्यहाँ ।
यही विद्यालय परिसरमा लक्ष्मीलाई मलमुत्र खुवाइ पिटिएको थियो ।
घटनाको वारेमा जानकारी लिन एक्सन फर सोसियल चेन्ज नामक गैह्र सरकारी संस्थाको सहकार्यमा त्यहाँ पुगेका पत्रकारहरुसँगको कुराकानीको क्रममा घटनाको विषयबस्तुलाई बग्याउन सक्रिय देखिन्थे छेडुप तमाङ ।
मृतक लक्ष्मी परियारको घर
सूर्यादय स्कूलको आडमा छ यीनको घर । उनी तिनै पात्र हुन,जस्ले हिरा लामा र काँइली तमाङलाई डोरी दिई मृतक लक्ष्मी परियारलाई पोलमा बाध्नमा सहयोग पु¥याएका थिए । सोही अभियोगमा उनकी पत्नी निरमाया अहिले पनि प्रहरी कष्टडीमा छिन ।
यस्तो रहस्यमय कथा सुनाए कि उनका अनुसार,यो हत्या हिरा र उनकी आमाको मिलेमतोमा भएको नभई उनै मृतक लक्ष्मीको पति मिलन नेपालीले गरेका हुन ।
उनका अनुसार स्कूलको पोलमा लक्ष्मी परियारलाई बाँधेर स्कूलका शिक्षक हिरा र उनका आमा काँइलीले दिशा कोच्याउदै गर्दा छेडुप स्कूल परिसरमै थिए । वच्चाको कपाल काटिरहे । घटनास्थलबाट दुई मिटर मात्र पर रहेर पनि उनले आफूले यो घटना नदेखेको जिकिर गरिरहे ।
२० गते भएको थियो स्कूल परिसरमा यो घटना । र यस्को भोलीपल्टै उनै छेडुप सहित हिराको आमा समेत प्रहरी चौकी पुगे । उनीहरुले जाहेरी दिएका थिए चौवास प्रहरी विटमा मृतक लक्ष्मी परियारले आफ्नो मानहानी गरेको भन्दै । त्यस्को पर्सिपल्टै सानोवाङथली आएको प्रहरीले दुबै पक्षलाई मिलापत्र गरि फर्किएको थियो । भने,त्यस्को भोलीपल्टै लक्ष्मीको हत्या गरिएको थियो ।
अहिले यो हत्या प्रकरणमा प्रहरीले हिरा लामा,काँइली तमाङ,मृतकको पति मिलन नेपाली सहित निरमाया तमाङलाई प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्धा चलाएको छ ।
घटनाको विषयवस्तु ढाकछोप गर्ने उदेश्यले कतै उनीहरुले मानहानीको निवेदन दर्ता गरेका थिएनन् ? प्रश्न पेचिलो बनेको छ । घटनाको निष्पक्षतापूर्ण छानबिन हुन जरुरी छ ।
तस्विर सौजन्य : विनयजंग बस्नेत
आईएसआईएसले छोराको मासु जव आमालाई खुवाए…
विप्लव माओवादीद्धारा भारतीय दुतावासको गाडीमा आगजनी
आन्दोलनकारीले ढंगा हान्दा सप्तरीमा यात्रृबहाक बस पल्टियो, २ को मृत्यु ९ घाइते
ज्यान जोगाउन नेताको छहारी खोज्दै डन, कुन नेताको संरक्षणमा को डन ?
अभियुक्त चौधरीको बयान सकियो , वकिलहरुको बहस सुरु